Alahady tsotra 21-D mandavantaona - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady tsotra 21-D mandavantaona
Alahady faha-21-D mandavantaona.
Manamafy izany ny Vak. I (Iz 66, 18-21) izay milaza fa ny tsy mahalala ny Tompo aza hovoriany hidera ny voninahiny. Tsy sanatria tsy akory hilazantsika izany hoe tsy ilaina ny miezaka mahalala an’Andriamanitra. Ny ezaka ataontsika dia ny mba ho fantatry ny Tompo.
Tsy ampy ny mihinana sy misotro miaraka aminy mba ho fantany (and. 26). Tsy ampy ny mitantara ny famppianarany. Ilaina ny miala amin’ny fahazaran-dratsy mba hahafahana miditra amin’ny varavarana ety. Raha fintinina araka izany dia mila mibebaka mba ho voavonjy.
Ilay fanontaniana nanitikitika ny sain’ny mpiara-dia tamin’i Jesoa “moa visty no voavonjy?” dia noho Izy nilaza fa tsy ireo heverina ho nianjeran’ny Tilikambo na ireo novonoin’i Heroda akory no tena mpanota fa raha tsy mibebaka isika dia ho very avokoa isika rehetra (Lk 13,1-5). Mba hidirana amin’ny varavarana ety ary araka izany dia mila fanetren-tena, mila ny fiekena ny halemena sy ny fahotana. Izay ihany no hahafahana mibebaka.
< Alahady faha-21 mandavantaona D
Alahady faha-20 mandavantaona D >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0593 s.] - Hanohana anay